Google Ads တွင်အသုံးများဆုံးအမှားအယွင်း ၉ ခုကို Semalt သတိပေးသည်
ညံ့ဖျင်းစွာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသောဂူဂဲလ်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှငွေရှာသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသာရှိသည်။ ကြော်ငြာကိုစတင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်သင့်လျော်သောဗဟုသုတမရှိဘဲသင်မျှော်လင့်မထားသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးဆက်များကိုသင်နာကျင်ခံစားရလိမ့်မည်။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကိုလွယ်ကူစွာဘယ်လိုသိမ်းဆည်းပြီးနောက်ထပ်များပြားတဲ့ကလစ်တွေကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ။ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
ဘာကြောင့် Google Ads ကိုသုံးတာလဲ။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဘာကြောင့်လောင်ကျွမ်းရတာလဲ။
ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးကွန်ယက်တွင်ကြော်ငြာခြင်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူများကကြော်ငြာခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်လေ့ရှိသည်။ ဤအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်ထုတ်ကုန်ကိုလက်ရှိစိတ်ဝင်စားသောသင်၏ပစ်မှတ်အုပ်စုထံတိကျစွာရောက်ရှိပါ။ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာတွင်သင်သတ်မှတ်ထားသောတိကျသောအုပ်စုတစ်ခုကို - လူ ဦး ရေစာရင်း၊ နေရာ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများဖြင့်ရွေးနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်မှကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများ၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ရောင်းအားကိုဂရုစိုက်လိုသောသင်၏ကုမ္ပဏီတည်ရှိမှုအစတွင်အထူးအရေးကြီးသည်။ မတူတာက နေရာချထားရေးအမြတ်ရိတ်ခြင်းသည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာကသင့်ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစတင်ရန်တိုက်တွန်းရာတွင်အလွန်ထိရောက်သည်။ ၎င်းသည်ကူပွန်များ (ဥပမာ - ဖြူငွေဘတ်ဂျက်အတွက် Y $ ရရန်သုံးခြင်းကဲ့သို့)၊ အတိုင်ပင်ခံ၏အကူအညီ Semalt အေဂျင်စီနှင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကအရမ်းလွယ်တယ် ဘာသာရပ်လေ့လာရန်အချိန်မပေးခဲ့သူတစ် ဦး အတွက်ငွေရေးကြေးရေးအရနာကျင်မှုမရှိသောအမှားများရှိသည်။
ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်လစဉ်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ သုံးစွဲခဲ့သည် (ဂူဂဲလ်မှအကြံပြုသောဘတ်ဂျက်) အကောင့်ကိုစာရင်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ၊ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေအပြင်၊ ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ သာလုံလုံလောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ် သင့်လျော်သော optimization ကင်ပိန်း၏။
ဖောက်သည်တစ် ဦး တွင်နေ့စဉ်ဘတ်ဂျက်ဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့်လစဉ်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုလုံးမှာဒေါ်လာ ၃၅၀ ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ကသူအားအမြန်ရလဒ်များကိုပြသရန်နှင့်သူ့ကိုဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တိုက်တွန်းလိုသူအားသူ့ကိုအကြံပေးခဲ့သည်။
ကလစ်တစ်ချက်နှုန်းနှုန်းများလေလေ၊ သင်၏ကြော်ငြာမကြာခဏပေါ်လေလေဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းများစက်မှုလုပ်ငန်း, စျေးကွက်နှင့်အရည်အသွေးရမှတ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Google ကရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကိုအကြံပေးသည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်အမြဲတမ်းလျှော့ချနိုင်သည် ထိရောက်သောမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး optimization။
အမှား - ၁။ သော့ချက်စာလုံးများကိုကိုက်ညီမှုမရှိပါ
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုသေချာပေါက်စားသုံးနိုင်ပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အသွားအလာမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အမှားတစ်ခုကကျယ်ပြန့်တဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့သော့ချက်စာလုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်“ Katowice accounting office” ဆိုတဲ့စကားစုပါတဲ့သင်၏ကြော်ငြာကို“ office”,“ accounting” ဒါမှမဟုတ်“ Katowice” ဆိုတဲ့စကားစုတွေအားလုံးကိုပြလိမ့်မယ်။ မင်းအဲဒီလိုမလိုချင်ဘူး
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူက“ လက်ကမ်းကြော်ငြာဖြန့်ဖြူးခြင်း” ဟူသောစကားစုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကိုက်ညီစေသည်။ သူ၏ကြော်ငြာတွင်မည်သည့်စကားစုပေါ်လာသနည်း။ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူး။ တကယ်တော့သူ့အစီအစဉ်အရမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါဖောက်သည်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအသုံးပြုခဲ့သည် "ကြော်ငြာဘုတ်များ"။ အကြီးမားဆုံးသောအသွားအလာသည် "Pyrzowice ဆိုက်ရောက်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာသွားခြင်း" ဟူသောစကားစုမှဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘတ်ဂျက်၏အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသုံးစွဲခဲ့သည်။
ပွဲများကိုပညာရှိစွာအသုံးပြုပါ။ ကိုက်ညီသောစကားစု (စတုရန်းကွင်းခတ်များ) တွင်ထိုသော့ချက်စာလုံးကိုသာဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကိုက်ညီသောစကားစု (quotation marks) တွင်ဤစကားစုပါသောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သာပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ "billboards" သည် "Katowice billboards" သို့မဟုတ် "cheap billboards" တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အထူးပြုထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်ဆင်တူသည့်အထူးပြု (နှင့်အတူ) သည်သင်ရွေးချယ်သောသော့ချက်စာလုံးများပါသောစကားစုများအတွက်ကြော်ငြာကိုပြလိမ့်မည်။ ခြားနားချက်မှာစကားလုံးများ၏အစီအစဉ်သည်အရေးမကြီးသောကြောင့်ကြော်ငြာကို Katowice ကြော်ငြာဘုတ်နှင့် Katowice ကြော်ငြာဘုတ်နှစ်ခုလုံးတွင်ပြလိမ့်မည်။
အနုတ်လက္ခဏာကိုက်ညီမှုများကိုမမေ့ပါနှင့် - ဤနည်းဖြင့်သင်ပြရန်မလိုချင်သောစကားလုံးများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ Allegro (သို့) OLX ဟာသင့်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတာသင်သိရင်ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုအနှုတ်လက္ခဏာစကားလုံးများအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုမှာ Keyword Planner ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာကိရိယာတွင်တိုက်ရိုက်တည်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်သင့်စိတ်ထဲပေါ်လာမည့်စကားစုများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပြီး Planner သည်တစ်လလျှင်စကားလုံးတစ်လုံးမည်မျှရှာဖွေသည်နှင့်၎င်းနှုန်းသည်မည်မျှနှုန်းထားများကိုပြသပြီးအခြားအလားတူစကားစုများကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
မကြာသေးမီကသင်၏အကောင်းဆုံးဖောက်သည်သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ - သူတို့သည်စျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ အချိန်မီပေးခြင်း၊ သတိပြုမိခြင်း၊ ကောင်းစွာဆက်သွယ်ခြင်းများ - နှင့်ဤအခြေခံတွင်အကောင်းဆုံးသောဖောက်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
အမှားအယွင်း ၂။ ၂။ သော့ချက်စာလုံးများသည်များသောအားဖြင့်ကြော်ငြာအုပ်စုတစ်ခုထဲသို့ထည့်သည်
ကြော်ငြာကိုသီးခြားကြော်ငြာအုပ်စုများကိုပြသည်။ သော့ချက်စာလုံးအားလုံးကိုကြော်ငြာအုပ်စုတစ်စုထဲထည့်ပြီးကြော်ငြာဖန်တီးမှု ၁-၂ ကိုဖန်တီးခြင်းသည်မှားသည်။ သော့ချက်ထားသောစကားစုသည်ကြော်ငြာတွင်ပါ ၀ င်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခွက်များ၊ ပျဉ်ပြားများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များအတွက်ဖန်တီးမှုများကိုဖန်တီးပါက၎င်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာအုပ်စုရှိရမည်။ ဒီနေ့သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးအတွက်ကြော်ငြာအုပ်စုတစ်စုနဲ့မတူညီတဲ့တီထွင်ကြံဆမှုများစွာရှိတာကဒီနေ့မှာပိုပိုများလာတယ်။
အရည်အသွေးရမှတ်ကိုကမ်းလှမ်းမှုနှင့်စကားစုများ၊ အကောင့်မှတ်တမ်း၊ မြေပုံစာမျက်နှာကိုက်ညီခြင်း၊ နှိပ်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းတို့ဖြင့်လွှမ်းမိုးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပိုမိုဖန်တီးနိုင်သည့်ကြော်ငြာများ၊ သင်ရရှိမည့်အရည်အသွေးရမှတ်များလေလေဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဂူဂဲလ်ကသင့်ကိုနိမ့်သောလေလံများနှင့်အဆင့်မြင့်သောအဆင့်များဖြင့်ဆုချလိမ့်မည်။
အမှား - ၃။ ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုမသိဘဲ Display နှင့် Search Networks ကိုရွေးချယ်ခြင်း
အရေးကြီး! ရှာဖွေရေးကွန်ယက် Google ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ပေါ်သောစာသားကြော်ငြာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထို ကြော်ငြာကွန်ယက် အင်တာနက်ပေါ်တယ်တွင်ပေါ်လာသောကြော်ငြာဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကိုစီစဉ်တဲ့အခါ၊ လူအများစုကပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုစလုံးကိုရွေးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ကွန်ရက်တွေကအရမ်းကွဲပြားတယ်။
ရှာဖွေရေးကွန်ရက်သည်ပိုမိုစျေးကြီးသော်လည်း၊ ပိုမိုမြင့်မားသောကလစ်နှိပ်နှုန်း (CTR) ရှိပြီး၎င်းသည်ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကြော်ငြာကွန်ယက်သည်ဈေးချိုသည်၊ သို့သော် CTR သည်ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်ကြော်ငြာကွန်ယက်ကိုသတိမရှိဘဲအသုံးပြုပါကသင်၏အရည်အသွေးအမှတ်ကိုလည်းလျော့နည်းသွားစေမည့်သင်၏ CTR တစ်ခုလုံးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ CTR ၏ခြားနားချက်မှာကြော်ငြာကွန်ယက်ရှိလူများသည်အရောင်းအဆင့်တွင်မဟုတ်သောကြောင့်သူတို့သည်သင်၏ကမ်းလှမ်းချက်အားရယူရန်မလိုအပ်ပေ။
ကြော်ငြာကွန်ယက်ကိုပုံရိပ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်နှင့်မြင်သာမှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည် - လိုဂိုနှင့်အမည်ကိုတစ်နေရာရာတွင်တစ်နေရာရာမှာအမြဲတမ်းပြသခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည် ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကနောင်တွင်သူတို့ပြန်လာနိုင်သည် သင့်ဆိုဒ်။
စတင်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေရေးကွန်ယက်ပေါ်တွင်စာသားကြော်ငြာများကိုအမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည်။ ဤကျေးဇူးကြောင့်သင်၏ထုတ်ကုန်/၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာနေသူများထံရောက်ရှိပါမည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာမှတ်မိခြင်းဖြစ်သည် - သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုသောဖောက်သည်များ၏ Display Network အားသင့်အားသတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Google Shopping ကလည်းရွေးချယ်စရာကောင်းပါတယ်။
သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်အလုပ်များစွာလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလစ်နှိပ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ပိုမိုနိမ့်သည်။ သို့သော်ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ဤအတွက်မသင့်တော်ပါ။ စျေးနှုန်း၊ သုံးစွဲနိုင်မှုနှင့်မြင်သာမှုတို့ဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြသရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင့်တွင်ဘတ်ဂျက်အနည်းငယ်သာရှိပါက၊ အရေးကြီးဆုံးထုတ်ကုန်များအတွက်ရွေးချယ်ထားသောစကားစုအချို့ကို စတင်၍ ၂/၃ ပတ်ကြာစစ်ဆေးပါ။ ပိုမိုကြီးမားသောဘတ်ဂျက်သည်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ (သို့) သော့ချက်စကားစုများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စစ်ဆေးရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကြော်ငြာကွန်ယက်ဖြင့်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုတိုးချဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်
အမှား - ၄။ အပျက်သဘောဆောင်သောစကားစုများကိုချန်လှပ်ထားခြင်း
သင်၏ကြော်ငြာပေါ်လာသောမည်သည့်စကားစုကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ အပျက်သဘောဆောင်သောစကားစုများကိုပုံမှန်ဖြည့်စွက်ပါ။ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့်ပြိုင်ဘက်များ၏အမည်များသို့မဟုတ်စကားစုများပေါ်တွင်သင်မဖော်ပြလိုပါ။ သင်ဒီမှာပြောင်းလဲခြင်းကိုရှာမတွေ့ပါနှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုမီးရှို့နိုင်သည်။
အမှား ၅။ တိုးချဲ့ခြင်းများကျော်လွှားခြင်း
Extensions များအသုံးပြုခြင်းသည်ဘာမျှမလိုပါ။ သင့်လျော်သောနေရာများကိုအချက်အလက်နှင့်ဖြည့်စွက်ပါ။ Google ၏အဆိုအရ extension တစ်ခုပြသခြင်းသည်သက်ဆိုင်သည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ တိုးချဲ့မှုများသည်ကြော်ငြာကိုဖန်တီးမှုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။ ကြော်ငြာ၏မြင်သာမှုနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုတိုးစေသည်။ အသုံးပြုသူကိုအသိပေးသည်။ ထို့အပြင်ဂူးဂဲလ်ကကြော်ငြာများကို extension များဖြင့်ဆုချသည်။
ပထမ ဦး စွာပြိုင်ဆိုင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ - မည်သည့် extension များအသုံးပြုသည်၊ မည်သည့်ခေါင်းစဉ်များ၊ ပရိုမိုးရှင်းများရှိပါသလဲ၊ ကြော်ငြာ၏အကြောင်းအရာကိုမည်သို့ဖော်ထုတ်သနည်း။
သင်၏အကြောင်းအရာတွင်အဓိကအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုလုံးတွင်သော့ချက်စာလုံးများပါ ၀ င်ရမည်။
သင်သည်“ အမှတ်အသားတစ်ခု” သို့မဟုတ်“ ကမ်ဘာ” ဟူသောစကားလုံးတစ်လုံးထက်မကကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ကြော်ငြာဖန်တီးမှုတစ်ခုစီကို ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှကြည့်ရှု။ ပြသခွင့်ရှိသည်။
အမှားအယွင်း ၆။ ၆ အရေးယူမှုပျောက်ဆုံးခြင်း (CTA)
CTA သည်အရေးယူရန်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ကြသည် "ဒီနေ့စစ်ဆေးပါ", "ငါတို့ကိုစမ်းကြည့်စမ်း!", "အားယူပါ!"။ ဒါဟာမွေးကင်းစကလေးငယ်ကြည့်ပေမယ့်အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တ ဦး တည်းအဘို့အစမ်းသပ်မှုပြု၏။ ကျနော်တို့ CTA နှင့် CTR မပါဘဲကြော်ငြာတွေကို run ။ ရလဒ်မှာတစ်ဖက်သတ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် - အဆုံးမှာအရေးယူဖို့ဖုန်းခေါ်တဲ့ကြော်ငြာတွေမှာ CTR နှစ်ကြိမ်နီးပါးရှိတယ်။
အမှား - ၇
၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်သုံးစွဲသူသည်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်အမှတ် ၇ မှ ၁၅ ထိလိုအပ်သည်။
၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုနှိပ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ပါ။ သုံးစွဲသူ ၃% ခန့်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလိမ့်မည်။ ကြွင်းသောအရာသည်ထွက်ခွာပါလိမ့်မယ် ဤတွင်ဤသည်မှာအမှတ်အသားပြုခြင်းသည်၎င်းတို့ထံရောက်ရှိခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်ကိုသတိရခြင်း၊ ပုံရိပ်ကိုပိုမိုအားကောင်းစေခြင်းနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းများကိုဖြစ်စေသည်။
remarketing Multi-stepped နိုင်ပါတယ် - ဥပမာ လွန်ခဲ့သော ၇/၃၀/၆၀ ရက်များအတွင်းသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများကို \_ t ဤလူများသည်အရောင်းအဝယ်၏အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ရှိပြီးမတူညီသောကြော်ငြာဖန်တီးမှုများလိုအပ်သည်။
Rotate ads - အသုံးပြုသူတ ဦး တည်းကိုမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့လုပ်ဆောင်မှုများကိုအားပေးတဲ့ကွဲပြားတဲ့ကြော်ငြာများကိုပြပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကြော်ငြာများကိုပိုမိုသဘာဝကျစွာမြင်တွေ့ရသည်။
remarketing: သင့်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီး ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုခဲ့သောသူများအကြောင်းကိုသင့်ကိုယ်သင်သတိပေးပါ။
အမှား - ၈။ သင်ကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသာကြည့်နေပြီး၊ သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအကြောင်းကိုတော့မစဉ်းစားဘူး
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမစတင်မီ၊ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်နည်းပညာနှင့်အသုံး ၀ င်မှုအရကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရမည်။ သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်သည်ရှုံးနိမ့်ရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ - ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားရမည်:
ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာနှင့်ဂရပ်ဖစ်များသည်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ပေးရမည်။
သငျသညျနှိပ်နိုင်သောဖုန်းနံပါတ်, အီးမေးလ်, အဆက်အသွယ်ပုံစံ, သင်လည်းတိုက်ရိုက်ချက်တင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီသည်မတူညီသောဆက်သွယ်မှုပုံစံကိုနှစ်သက်သည် - ၎င်းတို့အားရွေးချယ်ပါ။
အရေးကြီး! ကြော်ငြာမှလင့်ခ်သည်ကြော်ငြာနှင့်သက်ဆိုင်သောစာမျက်နှာခွဲသို့တိုက်ရိုက် ဦး တည်ရမည် - အမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခု။ အကယ်၍ ကြော်ငြာသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်လျှင်၊ သင်သည်ပင်မစာမျက်နှာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါကအသုံးပြုသူသည်ချက်ချင်းထွက်သွားလိမ့်မည်။
အမှား - ၉။ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာနှင့် Analytics အကောင့်များသည်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ
ဂူဂဲလ် Analytics သည်သင်၏သုံးစွဲသူများ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသောအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်မျှ ၀ င်ထွက်သွားသည်၊ အခြားစာမျက်နှာငယ်များမည်မျှတွေ့ခဲ့သည်၊ သူတို့သုံးစွဲခဲ့သည်အချိန်မည်မျှရှိသည် - ဤအချက်အလက်မရှိဘဲစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Google Analytics တွင်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ကြော်ငြာများသည်အသွားအလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ အကောင့်များဆက်စပ်မှုမရှိပါကဂူဂဲလ်ကြော်ငြာမှအသွားအလာသည်အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များမှအသွားအလာသို့စီးဆင်းသည်။
Google AdWords "ပုံ" အလုပ်မလုပ်ပါကအရာအားလုံးကိုထပ်မံစစ်ဆေးပါ။ သင်အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိပြီးကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုသင်ရှာဖွေနေလိမ့်မည်။
နေ့စဉ်ဘတ်ဂျက်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ထိရောက်သောကိုက်ညီသောသော့ချက်စာလုံးအနည်းငယ်ဖြင့်စတင်ပါ။ အကောင်းဆုံး သင်၏ကြော်ငြာများကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်ပါ။ အရာအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပါကသင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြှင့်တင်ပါ။ ကျနော့်အမြင်အရ AdWords သည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ထား သ၍ သုံးစွဲသူများနှင့်ဖောက်သည်အသစ်များထံအလျင်အမြန်ရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။